Umaki: uhlelo lokuphathwa kokuqukethwe | Martech Zone
Umaki: uhlelo lokuphathwa kokuqukethwe
Kungani Ngeluleka Izinkampani ze-SaaS Ngokumelene nokwakha i-CMS Yazo
NgeSonto, uJanuwari 31, 2021 NgeSonto, uJanuwari 31, 2021 Douglas Karr
Uzakwethu ohlonishwayo ungishayele ucingo ngisuka enkampanini yezokumaketha ngicela izeluleko ngesikhathi ekhuluma nebhizinisi elakha inkundla yalo eku-inthanethi. Inhlangano yakhiwa ngonjiniyela abanekhono futhi babemelana nokusebenzisa uhlelo lokuphathwa kokuqukethwe (i-CMS)… esikhundleni salokho bashayela ukuze basebenzise isisombululo sabo esikhuliswe ekhaya. Kuyinto engike ngayizwa ngaphambili… futhi ngivame ukweluleka ngayo. Abathuthukisi bavame ukukholelwa ukuthi i-CMS imane i-database
Ingabe Uvulekele Uhlelo Olusha Lokuphathwa Kokuqukethwe?
NgoLwesihlanu, ngoJuni 23, i-2017 NgeSonto, ngoJuni 25, i-2017 Douglas Karr
Eminyakeni embalwa eyedlule, i-100% yamakhasimende ethu asebenzise i-WordPress njengohlelo lokuphathwa kokuqukethwe. Ngemuva kweminyaka emibili nje kuphela futhi lelo nani sehle cishe ngesithathu. Njengoba bengilokhu ngakha futhi ngakha amasayithi kuWordPress iminyaka eyishumi manje, ngivame ukubheka kuleyo CMS ngenxa yezizathu ezimbalwa. Kungani Sisebenzisa i-WordPress Incredible Theme ukuhlukahluka nokuxhaswa. Amasayithi afana ne-Themeforest ayintandokazi kimi lapho ngingathola khona okuningi
Kungani Usebenzisa iDrupal?
NgoMgqibelo, Juni 3, 2017 NgoMgqibelo, Juni 10, 2017 UJohn Blue
Ngisanda kubuza ukuthi yini iDrupal? njengendlela yokwethula iDrupal. Umbuzo olandelayo oza engqondweni uthi "Ngifanele ngisebenzise iDrupal?" Lo ngumbuzo omuhle. Izikhathi eziningi ubona ubuchwepheshe futhi okuthile ngakho kukukhuthaza ukuthi ucabange ukubusebenzisa. Endabeni yeDrupal kungenzeka ukuthi uzwile ukuthi amanye amawebhusayithi ajwayelekile asebenza kulolu hlelo lokuphathwa kokuqukethwe komthombo ovulekile: iGrammy.com, iWhiteHouse.gov, iSymantec Connect, neNew
Saturday, June 3, 2017 Saturday, June 10, 2017
Abakhangisi abaningi ezweni lonke babukela phansi inzuzo yangempela engabanikezwa yi-Content Marketing System (CMS). Lezi zingxenyekazi ezimangalisayo zinikela ngengcebo yenani elingakatholakali elingaphezu kokumane livumele ukuthi bavele benze, basabalalise futhi babheke okuqukethwe kulo lonke ibhizinisi. Iyini i-CMS? Uhlelo lokuphathwa kokuqukethwe (i-CMS) luyipulatifomu yesoftware esekela ukwenziwa nokuguqulwa kokuqukethwe kwedijithali. Izinhlelo zokuphathwa kokuqukethwe zisekela ukuhlukaniswa kokuqukethwe nokwethulwa. Izici
Tuesday, March 14, 2017 Saturday, February 13, 2021
Okumangazayo: Ngenisa i-LinkedIn ibe Isiza Esihle, Esilungiselelwe Sokuqalisa
NgoLwesithathu, July 16, 2014 NgeSonto, uJanuwari 15, 2017 Douglas Karr
Kukaningi kunezikhathi lapho ungadingi ukuchitha izinkulungwane zamadola kusayithi elisha - udinga nje isibambi ndawo sephothifoliyo eku-inthanethi, umcimbi womkhiqizo olula noma ukubonisa ukukhombisa kwakho kabusha ku-inthanethi. Okumangazayo kunikeza isisombululo esisingathiwe lapho ungakha khona amasayithi ama-3 alungiselelwe amaselula, amahle angaphansi kwe- $ 100 ngonyaka. Okumangazayo kuyinsizakalo eku-inthanethi eyenza kube lula kakhulu kuwe ukwakha i-mobile enhle
Wednesday, July 16, 2014 Sunday, January 15, 2017